ကိုဗစ် ၁၉နဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကလုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေရဲ့အလှူငွေ ၊ ဦးပိုင် (MEC) အမြတ်ငွေနဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကူအညီတွေကိုသာ သုံးစွဲတာသာဖြစ် – Voice of Myanmar
ကိုဗစ် ၁၉နဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကလုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေရဲ့အလှူငွေ ၊ ဦးပိုင် (MEC)အမြတ်ငွေနဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကူအညီတွေကိုသာ သုံးစွဲတာသာဖြစ်
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၈-၂၀၂၀
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်၁၉ရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်လို့ ၆၁ယောက် သေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၄၂၉၉ဦး ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ကာ သူတို့နဲ့ထိတွေ့မိလို့ သောင်းချီတဲ့ဒေသအသီးသီးကသူတွေဟာ စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ် စစ်ဆေးမှုခံနေရပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် အရပ်ဘက်ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့တွေ နေ့မအားညမနား မနိုင်ဝန်ထမ်းနေချိန် တပ်မတော်ကရော ဘာတွေလုပ်ပေးနေသလဲ ? ဘယ်လိုတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိသလဲ ? ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို ဗီအိုအမ်သတင်းထောက် တာတီးက သီးသန့်မေးမြန်းထားပါတယ်။
VOM- ဗိုလ်ချုပ်ခင်မျာ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့ တပ်မတော်သားအရေအတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်လောက်ရှိလဲသိပါရစေ။
ZMT-တစ်​နိုင်​ငံလုံးမ​နေ့ကအထိ.၁၆.၉.၂၀၂၀အထိ(၄၆)​ယေက်​ရှိပါတယ်​၊အဲဒီအထဲက၁၇​ယောက်​သည်​ပထမအသုတ်​ကပါ၊ ဒုတိယအသုတ်မှာ​တော့၂၉​ယောက်​ပါ၊ဒုတိယအသုတ် ၂၉​ယောက်​မှာတပ်​မ​တော်​သား​တွေ​ရောအငြိမ်းစား​တွေ​ရောတပ်​မ​တော်​သားမိသားစု​ဝင်တွေရော ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ၁၇.၉.၂၀၂၀.ရက်​နေ့မှာ တစ်​ယောက်​ဆုံးပါးပါတယ်။ ဆရာမကြီး​ဒေါ်ခင်​အေးမြင့်​ဒုတိယဗိုလ်​မှူးကြီး(ငြိမ်း)ပါ။ အသက်​၆၅နှစ်​ပါ၊စမ်း​ချောင်းမှာ ​နေပါတယ်​။ အပြင်​မှာ​နေတာ​ပေါ့​နော်​။ တပ်​မ​တော်​သားအငြိမ်းစား​တွေကတပ်​မ​တော်​မှ​ဆေးကုသခွင့်​ရှိပါတယ်​။ သူကcovid 19​ရောဂါသံသယရှိလို့တပ်​မ​တော်​ဆေးကုသမှုခံယူရင်း​သေဆုံးတာ​ပေါ့
VOM-ကွာရန်တိုင်း ဝင်နေဆဲ၊ ဝင်ပြီး တပ်မတော်သားအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ?
ZMT-အဲဒါ​တော့​အတိအကျမသိ​သေးပါဘူး။ ဘာ​ကြောင့်​လဲ ဆိုတော့ ဆက်​စပ်​ပတ်​သက်​သူသံသယရှိသူအကုန်​ဝင်​ခိုင်းတာကြောင့်ပါ။
ZMT- တပ်​မ​တော်​မှQ စင်​တာအ​ရေအတွက်​က​တော့တစ်​နိုင်​ငံလုံးမှာ(၁၆) ခုရှိပါတယ်​။
ZMT- ရန်​ကုန်​တိုင်းမှာဆိုလှိုင်​မှာ တပ်​မ​တော်​သား​တွေဝင်​နိုင်​တဲ့ အ​ရေအတွက်​တော့မ​ပြော​တော့ဘူး။ အရပ်​သားအ​ရေအတွက်​က ရန်​ကုန်​တိုင်းမှာ၁၀၈၀ဦး၊ မန္တ​လေးတိုင်းမှာ၈၆ဦး၊​ နေပြည်​တော်​မှာ၇၀၂၀၊​ ရွှေ​ညောင်​မှာ၉၀ဦး၊ ကျိုင်းတုံမှာ၁၄၄ဦး၊ ရမခဘက်​ လားရှိုးမှာ၈၀၀ဦး၊​ မော်​လမြိုင်​မှာ၇၀၀ဦး၊ မြိတ်​မှာ၁၂၀ဦး၊​ ကော့​သောင်းမှာ၄၀ဦး၊ မုံရွာမှာ၃၀၊​တောင်​ငူမှာ၈၀ဦး၊ ခိုလန်​မှာ၈၀ဦး အားလုံး-၁၆​နေရာမှာအရပ်​သား၉၅၅၀ဦးစာအတွက်​ပြင်​ဆင်​ပေးထားပါတယ်​၊ အရပ်​သား​တွေအတွက်​ပြင်​ဆင်​ပေးထားတာ​ပေါ့​နော်​၊ အရပ်​သား​တွေဝင်​ပြီးတာက ရန်​ကုန်​လှိုင်​မှာလူဦး​ရေ၃၀၀၀​ကျော်​လောက်​ဝင်​ပြီးသွားပါပြီ၊​ နေပြည်​တော်​မှာဆိုရင်​လည်း လူဦး​ရေအဲဒီ​လောက်​ဝင်​ပြီးသွားပါပြီ။
VOM- ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသုံးစရိတ်ကတပ်မတော်ဘက်ဂျက်ထဲကကုန်ရလား? ပြည်ထောင်စုကထပ်ပေးလား?
ZMT- ဒီအသုံးစားရိတ်​တွေကတပ်​မ​တော်​ဘတ်​ဂျက်​ထဲကသုံး​နေတာမဟုတ်​ပါဘူးခင်​ဗျာ။ တပ်​မ​တော်​သားအားလုံးရဲ့ တစ်​ရက်​စာအလှူ​ငွေ၊ တစ်​လစာအလှူ​ငွေ​တွေက​နေပြီးသုံး​နေတာပါ၊ တစ်​ချို့ကိစ္စ​တွေမှာဦးပိုင်​နဲ့ MEC ရဲ့အမြတ်​ငွေ​တွေရှိပါတယ်​၊အမြတ်​ငွေအချို့ကို တပ်​မ​တော်​သက်​သာ​ချောင်​ချိ​ရေးရံပုံ​ငွေအဖြစ်​သုံးလို့ရတယ်​။ အဲဒီအထဲကသုံးပါတယ်​။
ZMT- နိုင်​ငံတကာအကူအညီက​တော့ တပ်​မ​တော်​ကိုတရုတ်​ကလာကူညီ​နေတာကို ကျွန်တော်​တို့သတင်းထုတ်​ပြန်​ပြီးဖြစ်​ပါတယ်​၊တရုတ်​ကွန်​မြူနစ်​ပါတီကကူညီတာရှိတယ်​၊တရုတ်​တပ်​မ​တော်​ကကူညီတာ​တွေရှိပါတယ်​။
ZMT- ကုန်​ကျစားရိတ်​က​တော့​လော​လောဆယ်​ပြောလို့မရ​သေးပါဘူး ဒီအတွက်​စနစ်​တကျစာရင်းလုပ်​ထားပါတယ်​။
VOM-တခြားအခက်အခဲတို့ စိန်ခေါ်မှုတို့က ဘာတွေရှိမလဲ?
အခက်​အခဲစိန်​ခေါ်မှုက​တော့​ပြောရရင်​တပ်​မ​တော်​က Qစင်​တာ​တွေဖွင့်​ထားတယ်၊ ​ဒါ​ပေမယ့်​ရန်​ကုန်​မှာဖွင့်​ထားတဲ့ Q စင်​တာလှိုင်​မှာ ဝင်​သူကတစ်​ရာ​ကျော်​နှစ်​ရာနီးပါးဘဲရှိတယ်​၊​ နေပြည်​တော်​မှာလည်းလူဦး​ရေ ၂၀၀ နီးပါး ဘဲရှိတယ်​၊ကျန်​တဲ့ Q စင်​တာ​တွေမှာလည်း.​ရွှေ​ညောင်​မှာဝင်​တာရှိတယ်​၊ လူဦး​ရေ ၇၀​လောက်​ဘဲရှိတယ်​ဆို​တော့ ဘာ​ကြောင့်​တပ်​မ​တော်​ကဖွင့်​ထားတဲ့ Q စင်​တာ​တွေကိုအရပ်​သား​တွေဘာ​ကြောင့်​ရောက်​မလာတာလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စ ပြည်​သူ​တွေကလည်းသိချင်​နေကြပါတယ်​။ တပ်​မ​တော်​ကာကွယ်​ရေးဦးစီးချူပ်​က covid 19 ညှိနှိုင်းအစည်းအ​ဝေးမှာ​ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်​ပါတယ်။​၊အမျိုးသား​ရေးတာဝန်​တစ်​ရပ်​အ​နေနဲ့ မိမိတို့လုပ်စရာရှိတာကို တက်​တက်​ကြွကြွပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​သွားမယ်​လို့​ပြောပြီးဖြစ်​ပါတယ်​ဒါပါဘဲ။
#voiceofmyanmar #VOM #တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ #ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း
ကိုဗစ္ ၁၉နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြဟာ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕အလႉေငြ ၊ ဦးပိုင္ (MEC) အျမတ္ေငြနဲ႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ အကူအညီေတြကိုသာ သုံးစြဲတာသာျဖစ္
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၈-၂၀၂၀
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္၁၉ေရာဂါ ဒုတိယလႈိင္းျဖစ္လို႔ ၆၁ေယာက္ ေသဆုံးၿပီး လူေပါင္း ၄၂၉၉ဦး ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ကာ သူတို႔နဲ႔ထိေတြ႕မိလို႔ ေသာင္းခ်ီတဲ့ေဒသအသီးသီးကသူေတြဟာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးမႈခံေနရပါတယ္။
ဒီအေျခအေနေတြေၾကာင့္ အရပ္ဘက္က်မၼာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လူမႈေရးအဖြဲ႕ေတြ ေန႔မအားညမနား မႏိုင္ဝန္ထမ္းေနခ်ိန္ တပ္မေတာ္ကေရာ ဘာေတြလုပ္ေပးေနသလဲ ? ဘယ္လိုေတြေထာက္ပံ့ေပးတာေတြရွိသလဲ ? ဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကို ဗီအိုအမ္သတင္းေထာက္ တာတီးက သီးသန႔္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
VOM- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္မ်ာ့ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ရွိထားတဲ့ တပ္မေတာ္သားအေရအတြက္ တႏိုင္ငံလုံးမွာဘယ္ေလာက္ရွိလဲ သိပါရေစ။
ZMT- တစ္ႏိုင္ငံလုံးမေန႔ကအထိ.၁၆.၉.၂၀၂၀ အထိ (၄၆)ေယက္ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအထဲက ၁၇ေယာက္သည္ပထမအသုတ္ကပါ၊ ဒုတိယအသုတ္မွာေတာ့ ၂၉ေယာက္ပါ၊ ဒုတိယအသုတ္ ၂၉ေယာက္မွာတပ္မေတာ္သားေတြေရာ အၿငိမ္းစားေတြေရာ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္ေတြေရာ ပါပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ၁၇.၉.၂၀၂၀.ရက္ေန႔မွာ တစ္ေယာက္ဆုံးပါးပါတယ္။ ဆရာမႀကီးေဒၚခင္ေအးျမင့္ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)ပါ။ အသက္၆၅ႏွစ္ပါ၊စမ္းေခ်ာင္းမွာ ေနပါတယ္။ အျပင္မွာေနတာေပါ့ေနာ္။ တပ္မေတာ္သားအၿငိမ္းစားေတြကတပ္မေတာ္မွေဆးကုသခြင့္ရွိပါတယ္။ သူက covid 19ေရာဂါသံသယရွိလို႔တပ္မေတာ္ေဆးကုသမႈခံယူရင္းေသဆုံးတာေပါ့
VOM -ကြာရန္တိုင္း ဝင္ေနဆဲ၊ ဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားအေရအတြက္ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ?
ZMT- အဲဒါေတာ့အတိအက်မသိေသးပါဘူး ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ သံသယရွိသူအကုန္ဝင္ခိုင္းတာေၾကာင့္ပါ။
VOM – တပ္မေတာ္ကြာရန္တိုင္းစင္တာ ဘယ္ေလာက္အေရအတြက္ရွိလဲ?
ZMT- တပ္မေတာ္မွ Q စင္တာအေရအတြက္ကေတာ့တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ (၁၆) ခုရွိပါတယ္။
VOM -ဒီစင္တာေတြထဲမွာ ဘယ္ေလာက္က်ဴဝင္သူရွိသြားလဲ ? အရပ္သားေတြေရာပါလား? တပ္မေတာ္မိသားစုေတြလား?
ZMT- ရန္ကုန္တိုင္းမွာဆို လႈိင္မွာ တပ္မေတာ္သားေတြဝင္ႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္ေတာ့မေျပာေတာ့ဘူး ။ အရပ္သားအေရအတြက္က ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၁၀၈၀ ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းမွာ ၈၆ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၇၀၂၀၊ ေ႐ႊေညာင္မွာ ၉၀ ဦး၊ က်ိဳင္းတုံမွာ ၁၄၄ ဦး၊ ရမခ ဘက္ လားရႈိးမွာ ၈၀၀ ဦး၊ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ၇၀၀ဦး၊ ၿမိတ္မွာ ၁၂၀ ဦး၊ ေကာ့ေသာင္းမွာ ၄၀ ဦး၊ မုံ႐ြာမွာ ၃၀ ၊ေတာင္ငူမွာ ၈၀ ဦး၊ ခိုလန္မွာ ၈၀ ဦး အားလုံး-၁၆ေနရာမွာအရပ္သား ၉၅၅၀ ဦးစာအတြက္ျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္၊ အရပ္သားေတြအတြက္ျပင္ဆင္ေပးထားတာေပါ့ေနာ္၊ အရပ္သားေတြဝင္ၿပီးတာက ရန္ကုန္လႈိင္မွာလူဦးေရ ၃၀၀၀ေက်ာ္ေလာက္ဝင္ၿပီးသြားပါၿပီ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာဆိုရင္လည္း လူဦးေရအဲဒီေလာက္ဝင္ၿပီးသြားပါၿပီ။
VOM – ဒီ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသုံးစရိတ္က တပ္မေတာ္ဘက္ဂ်က္ထဲကကုန္ရလား? ျပည္ေထာင္စုကထပ္ေပးလား?
ZMT- ဒီအသုံးစားရိတ္ေတြကတပ္မေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲကသုံးေနတာမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ တပ္မေတာ္သားအားလုံးရဲ႕ တစ္ရက္စာအလႉေငြ၊ တစ္လစာအလႉေငြေတြကေနၿပီးသုံးေနတာပါ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာဦးပိုင္နဲ႔ MEC ရဲ႕အျမတ္ေငြေတြရွိပါတယ္၊အျမတ္ေငြအခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးရံပုံေငြအျဖစ္သုံးလို႔ရတယ္။ အဲဒီအထဲကသုံးပါတယ္။
VOM -ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေရာ တပ္မေတာ္ကရလား?
ZMT- ႏိုင္ငံတကာအကူအညီကေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုတ႐ုတ္ကလာကူညီေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကကူညီတာရွိတယ္၊တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ကကူညီတာေတြရွိပါတယ္ ။
VOM – စုစုေပါင္းဘယ္ေလာက္ကုန္က်သြားၿပီလဲ?
ZMT- ကုန္က်စားရိတ္ကေတာ့ေလာေလာဆယ္ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး ဒီအတြက္စနစ္တက်စာရင္းလုပ္ထားပါတယ္။
VOM -တျခားအခက္အခဲတို႔ စိန္ေခၚမႈတို႔က ဘာေတြရွိမလဲ?
အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈကေတာ့ေျပာရရင္တပ္မေတာ္က Qစင္တာေတြဖြင့္ထားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ရန္ကုန္မွာဖြင့္ထားတဲ့ Q စင္တာလႈိင္မွာ ဝင္သူကတစ္ရာေက်ာ္ႏွစ္ရာနီးပါးဘဲရွိတယ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္းလူဦးေရ ၂၀၀ နီးပါး ဘဲရွိတယ္၊က်န္တဲ့ Q စင္တာေတြမွာလည္း.ေ႐ႊေညာင္မွာဝင္တာရွိတယ္၊ လူဦးေရ ၇၀ေလာက္ဘဲရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္တပ္မေတာ္ကဖြင့္ထားတဲ့ Q စင္တာေတြကိုအရပ္သားေတြဘာေၾကာင့္ေရာက္မလာတာလဲဆိုတဲ့ ကိစၥ ျပည္သူေတြကလည္းသိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္က covid 19 ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။၊အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္စရာရွိတာကို တက္တက္ႂကြႂကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ဒါပါဘဲ။
#voiceofmyanmar #VOM #တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ #ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း